Somalia & Kenya oo wadaagaya Xirmooyinka Shidaalka Badda dacwadeeda loo gudbiyay ICJ. - Awdinle Online
Somalia & Kenya oo wadaagaya Xirmooyinka Shidaalka Badda dacwadeeda loo gudbiyay ICJ.
Xukuumadda Dooxa ayaa aad u daneyneysa ka faaiideysiga soosaarka Khayraatka badda gaar ahaan Saliida, sidoo kale waxaa damac uu kasoo galay Shirkadda Caalamiga ah ee Shidaalka Talyaaniga laga leeyahay ee ENI.
Mustaqbal ayaa 7-dii May 2021 daabacday Warbixin ay heshay oo la xiriirta in Soomaaliya ay dib uga laabaneyso dacwadda Badda oo haatan go’aan keliya laga sugayo Maxkamadda ICJ oo dhageysigii ugu dambeeyay ay ka baaqatay Kenya.
Previous articleRooble oo diiday in la-Taliyaha Farmaajo Ee Doorashada kala Shaqeeyo Shirka 20-ka May
Next articleDagaal ka socda Magaalada Jowhar & faah faahin laga helayo